Waa maxay sababta AWS Shahaadadu ay muhiim u tahay? Mushaharka AWS Shahaadada Sameeya
Waa maxay sababta AWS Shahaadadu ay muhiim u tahay? AWS Shahaadada Lagu Sameeyay Dakhliga Doolarka
Waa maxay Qiimaha Shahaadada AWS?
Mushaharka AWS Shahaadada Sameeya
Laga bilaabo wadada AWS Shahaadada
AWS Certified Solutions Architect - Heerka Associate
AWS Certified Solutions Architect - Heerka Xirfadda
Horumarinta Shahaadada AWS - Heerka Associate
AWS Maamulaha SysOps Maamulaha - Associate
AWS Agaasimayaasha DevOps Engineer - Xirfadle (Beta)
Waa waxbarasho caadi ah in la soo iibsado AWS xaqiijinta waa hab aan caadi aheyn oo u qalma kaqaybqaadashadaada iyadoo la raacayo saaxiibbadaada iyo ganacsigaaga iyo inaad ballaariso awooda ururada ee codsiyada AWS ku saleysan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira faa'iido kale oo aan la qiyaasi karin sida aan horey u soo dhicin. Waxay ka timaaddaa sababtoo ah 2015 IT Xirfadaha iyo Miisaaniyadda Mushaharka oo ay hogaaminaysay Global Knowledge iyo Windows IT Pro waxay caddeeyeen in mushaharka caadiga ah ee afar aqoonsiga AWS uu ka sarre maray $ 100,000. Inkasta oo aysan jirin wax hubaal ah in kalsoonidu ay u dhigantay magdhaw lixdaad ah, wax si xun looma qaban karin wax dhibaato ah.
Horumarinta Shahaadada AWS - Hawlaha Lacagta $ 137,825
AWS Certified Solutions Architect - Heerka Xirfadaha $ 117,434
AWS Certified Solutions Architect - Heerka Associate $ 114,935
AWS Maamulaha Maamulaha SysOps - Laanta Associated $ 108,046
Lagu xushay maqaal 2016 ah oo ku saabsan waxa loo baahan yahay si loo helo aqoonsiga AWS. (Furan daaqad kale)
Qodobbada AWS (iyo AWS diyaarinta) waa mashruucyo ku salaysan qorshaha loogu talagalay qabanqaabiyeyaasha qabanqaabada, horumarinta iyo qaabdhismeedka hawlaha kormeerayaasha. Qayb kasta oo ka mid ah, xaqiijinta heerka lamaanaha iyo khabiir ayaa lagu gartaa. Inta aan la diyaarineyn looma baahna kahor intaan la isku deymin imtixaanka kalsoonida, waxaa si gaar ah loo soo jeediyey.
Xaqiijintan waxay ogolaatay in aad leedahay khibradda gacanta oo adeegsanaysa AWS si aad u qorsheyso qaabka ugu fudud ee la heli karo, kharashka wax-ku-oolka ah, dembi loo dulqaadan karo iyo qaabdhismeedyo badan oo wareegsan. Waxay xaqiijineysaa awooddaada si aad u kala soocdo oo u sharaxdo shuruudaha codsiga AWS ku salaysan iyo in ay qaataan qaabsocodyada la aqbalay kadib dhisidda codsiyo sugan iyo mid adag oo ku saabsan marxaladda AWS.
Diyaarinta Qorsheynta: Diiwaangelinta AWS
Cadeynta Tani waxay ansixinaysaa dabacsanaanta khaaska ah iyo ka qayb qaadashada codsiyada wareegsan iyo qaabdhismeedka wareega AWS.
Diyaarinta Qorsheynta: Diiwaan Gelinta Barta AWS
Aqoonsigani wuxuu ansixinayaa awoodaada gaarka ah ee horumarinta iyo hirgelinta codsiyada marxaladda AWS. Imtixaanku wuxuu tijaabiyaa aragtidaada fikradaha la socda:
Sameynta adeega mudnaanta ee AWS ee arjiga.
U isticmaalka AWS SDKs si aad ula xiriirto adeegyada AWS ee codsigaaga.
Nidaamka isku dhafan ee hagaajiya fulinta adeegyada AWS ee codsigaaga shaqaaleysiinta.
Nabadgalyada dalbashada cod-bixinta (qaybaha IAM, caddaynta, cod-bixinta, iyo wixii la mid ah.)
U diyaarsan diyaarinta: Horumarinta AWS
Maamulayaasha Hawlaha Maamuleed
Xaqiijintan waxay ansixinaysaa khibradaada ku saabsan dejinta, ka shaqeynta iyo ilaalinta qaabdhismeedka AWS. Waxay xaqiijineysaa awooddaada si aad u kala soocdo oo isu soo uruuriso shuruudaha si ay u muujiso jawaabta loo soo saaro oo ka shaqeyneysa AWS. Sidoo kale waxay ansixinaysaa awooddaada si aad u siiso hawlaha AWS iyo jihada qorshaha oo ay kuu qoraan hababka ugu wanaagsan ee loo marayo hab nololeedka nolosha.
Qoritaanka diyaarinta: Hawlaha Qalabka ee AWS
Aqoonsigaani wuxuu ansixiyaa aqoonta gaarka ah ee bixinta, shaqada iyo kormeerka qaababka codsiyada wareegsan ee marxaladda AWS.
Qoritaanka diyaarinta: Hawlgallada Nidaamka AWS
Kubaddu waxay ku taalaa Maxkamaddaada
Marka aad fursad u leedahay inaad si fudud u bilawdo AWS, hab aan caadi aheyn si aad u hesho cagahaaga qoyan waxaa sahamaya rikoorada bilaashka ah iyo sheybaarada laga heli karo goobta AWS. Koorsada AWS Essentials waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad ka qaadato hababka AWS ka hor intaadan ka tegin habka kalsoonida.
Waa maxay shahaadada AWS?